Yan Aung: ဘလော့ဂ်တွင် Snap Preview ထည့်ခြင်း
တစ်ချို့ ဘလော့ဂ်တွေကို သွားလည်ရင် သူတို့ဘလော့ဂ်ပေါ်က ပုံလေးတွေ၊ Link လေးတွေပေါ်ကို Mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ့ ပုံလေးတွေ၊ Link လေးတွေရဲ့ original site တွေကို preview သဘောလေး ပြတာမျိုးတွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်. ခုပြောမှာက အဲဒါကို ဘယ်လို လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာပါပဲ. အရမ်းကို လွယ်ပါတယ်.
Snap.com ဆိုတဲ့ Site လေးကိုသွားပါ. Sign up လုပ်ပါ. HTML Script လေးတစ်ခု ပေးပါလိမ့်မယ်. ဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ instruction လေးလည်း ပေးပါလိမ့်မယ်. ခုကျွန်တော်လုပ်ထားတဲ့ Powerpoint Slideshow လေးကို ကြည့်လိုက်ရင် နားလည်ပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ
Previewing the sites using 'Snap'